(src)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရေးပါတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ ။
(src)="2.1"> ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို တိုက်ယူဖို့အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘယ်တုန်းကမှနဲ့ မတူတဲ့ ညီညွတ်ခြင်းမျိုးနဲ့ တူ ⁠ တူလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
(src)="2.3"> ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တွေ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အာရုံဝင်စားခဲ့ကြပါတယ် ။
(src)="3.1"> ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကြေညာစာတမ်းကို ဖန်တီးဖို့ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များ ⁠ များက လတ်တလောမှာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ် ၊
(src)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ့ Cheezburger .
(src)="3.7"> တောင် အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ် ။
(src)="5.4"> ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄င်း အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝိုင်းများက ပို ၍ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ၊
(src)="5.5"> ပို ၍ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းနှင့် ပို ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်များကို သယ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည် ။
(src)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို့ ၊
(src)="7.2"> ၄င်းတို့နှင့်ပတ်သက် ၍ သဘောတူကြ ၊
(src)="7.3"> သို့မဟုတ် သဘောမတူကြပါနှင့် ၊
(src)="7.7"> အင်တာနက်ကသာ ၄င်းတို့ကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ ၍ ဖြစ်ပါသည် ။
(src)="8.1"> အင်တာနက်ကို လွတ်လပ် ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆက်လက်တည်ရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ ။
(src)="10.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ် ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော အင်တာနက်အတွက် ရပ်တည်ပါသည် ။
(src)="11.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်တာနက် ပေါ်လစီကိုဆောင်ရွက်ရာနှင့် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ပေါ်လွင် ၍ အများပါဝင်နိုင်သော လုပ်ရပ်များကို အားပေးထောက်ခံပါသည် ။
(src)="12.1"> ထုတ်ဖော်ခြင်း ၊
(src)="12.2"> အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာမဖြတ်ရန်
(src)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင်း ၊
(src)="13.2"> လျင်မြန် ၍ တတ်နိုင်သော ကွန်ယက်များကို အလုံးစုံရယူအသုံးပြုနိုင်ရေး အသိမြှင့်တင်ကြရန်
(src)="14.2"> အင်တာနက်ကို လူတိုင်းက လွတ်လပ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင် ၊
(src)="14.3"> ဆက်သွယ်နိုင် ၊
(src)="16.1"> တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့် ၊
(src)="1.2"> မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ သို့ ယခုမှ အလည် ​ အပတ် ​ ရောက် ​ ရှိ ​ သူ ​ များ ​ အတွက် အများ ​ ပြည် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ် ​ များ ​ နှင့် သွား ​ လာ ​ လည်ပတ် ​ ရန် ​ မှာ အခက် ​ အခဲ ​ တစ် ​ ခု ​ ဖြစ် ​ နိုင် ​ သည် ။
(trg)="1.4"> Jak na swoją powierzchnię , tj . 590 000 km2 , infrastruktura drogowa jest zniszczona i słabo rozwinięta .
(trg)="1.5"> Co prawda sieć kolejowa się rozwija , ale nadal w większości miast po prostu jej nie ma .
(src)="3.1"> အများ ​ ပြည် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ် ​ များ ​ နှင့် ပတ်သက် ​ သည့် ​ ပြဿနာ ​ မှာ မြို့တော် ​ တွင် လူ ​ သိ ​ ပြီး ​ သား ပြဿနာ ​ တစ် ​ ခု ​ ဖြစ် ​ သည် ။
(trg)="2.1"> Komunikacja publiczna w ośrodkach zurbanizowanych jest ograniczona do zatłoczonych autobusów i minibusów ,amiejska kolejka funkcjonuje jedynie w stolicy , Antananarywie .
(src)="3.3"> မြို့တွင်း ​ လမ်း ​ များ ​ မှာ များ ​ သော ​ အား ​ ဖြင့် အောက် ​ ပါ ​ ပုံ ​ တွင် မြင် ​ ရသ ​ ကဲ့သို့ ​ ပင် ပိတ် ​ ကျပ် ​ နေ ​ လေ့ ​ ရှိ ​ သည် ။
(trg)="3.2"> Na blisko dwa miliony mieszkańców przypada szacunkowo 110 000 samochodów .
(trg)="3.3"> Ulice są często zakorkowane , co można zaobserwować na zdjęciu poniżej :
(src)="6.2"> ဒီ ​ စနစ် ​ က မြို့ ​ အပေါ် ​ ခြမ်း ​ နဲ့ မဟာ ​ မ ​ စိ ​ န ​ မြို့ ​ နယ် ​ နှစ် ​ ခု ​ ကို ဆက် ​ သွယ် ​ ပေး ​ သွား ​ မှာ ​ ပါ ။
(trg)="5.1"> Wpływ ruchu drogowego na przemieszczanie się w mieście został również zarejestrowany na filmie Viva Madagascar :
(src)="6.3"> ဒါပေမဲ့ မြို့တော် ​ ဝန် ​ က ဘယ် ​ တော့ ​ စ ​ လုပ် ​ မယ် ​ ဆို ​ တာ ​ နဲ့ ဘဏ္ဍာ ​ ရေး ကုန်ကျ ​ စရိတ် ​ အသေး ​ စိတ် ​ ကို မ ​ ပေး ​ သေး ​ ပါ ​ ဘူး ။
(trg)="6.1"> Korki uliczne są do tego stopnia nie do zniesienia dla mieszkańców , że władze Antananarywy rozważają możliwość zainstalowania systemu miejskiej kolejki liniowej między dwoma najbardziej zaludnionymi wzgórzami :
(src)="6.6"> မာ့ ( ခ် ) ဟာ ​ မဲ ( လ် ) က ရေးခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="6.2"> Linia ta powinna zapewnić komunikację Haute Ville i Mahamasina .
(src)="6.7"> ကျွန်တော် ​ တို့ ​ အနေ ​ နဲ့ ကောင်းကင် ​ ကား ​ တွေ ​ ဆောက် ​ ဖို့ ​ ထက် ဆင်ခြေဖုံး ​ ဆင်းရဲသား ​ ရပ် ​ ကွက် ​ တွေ ​ ကို ဘယ် ​ လို ​ သန့် ​ ရှင်း ​ ရ ​ မ ​ လဲ ၊
(trg)="6.3"> Tymczasem , PDS na chwilę obecną nie dostarcza żadnych szczegółów co do początku prac ani kosztów projektu .
(src)="6.8"> လူ ​ သား ​ သိက္ခာ ​ နဲ့ ပို ​ ကိုက် ​ မယ့် နေရာ ​ တွေ ​ ကို ဘယ် ​ လို ​ ရွှေ့ ​ ပြောင်း ​ ပေး ​ ရ ​ မ ​ လဲ ၊
(trg)="6.4"> W sprawie wyboru miejskiej kolejki liniowej , stolica zainspiruje się sposobem transportu publicznego , jaki istnieje w Paz .
(src)="6.9"> ကျန်းမာ ​ ရေး ​ စောင့်ရှောက် ​ မှု ဘယ် ​ လို ​ ပေး ​ ရ ​ မ ​ လဲ ​ နဲ့ သူ ​ တို့ ​ ကလေး ​ တွေ ​ ကို ဘယ် ​ လို ​ ပညာသင် ​ ပေး ​ ရ ​ မ ​ လဲဆို ​ တာ ​ တွေ စ ​ လုပ် ​ သင့် ​ တာ ​ မဟုတ် ​ ဘူး ​ လား ။
(trg)="6.5"> Biorąc pod uwagę szacowane koszty tego projektu ( 166 milionów euro lub 230 milionów dolarów dla systemu w La Paz ) i znaczną biedę miasta , wiele osób kwestionuje słuszność tego projektu .
(src)="7.3"> နောက် ​ ခြောက် ​ လ ​ အတွင်း ​ မှာ မ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ တစ် ​ လျှောက် ၁ ⁠ ၁ ​ ၇ ​ ၀ ​ ၀ ကီ ​ လို ​ မီ ​ တာရှည် ​ တဲ့ ​ လမ်း ​ တွေ ​ ကို ပြင် ​ ဖို့ ​ လို ​ ပါ ​ တယ် ယူ ​ တီ ​ အို က အမြန် ​ ဆုံး ​ ပြင် ​ ဖို့ လို ​ နေ ​ တဲ့ လမ်း ​ တွေ ​ နဲ့ သ ​ ဘာ ​ ဝ ​ ဘေး ​ ကြောင့် ​ ပျက်စီး ​ သွား ​ တဲ့ လမ်း ​ တွေ ​ ကို ယာယီ ​ ပြင် ​ ဖို့ ​ ကို ဦးစီး ​ ဆောင်ရွက် ​ သင့် ​ တယ် ။
(trg)="6.6"> Marc Harmelle napisał :
(trg)="6.7"> Czy zamiast myśleć o stworzeniu kolejki liniowej , nie powinno się zacząć wyburzać dzielnice dla ubogich , przekwaterowywać tych ludzi w miejsca , w których mogliby godnie żyć , zadbać o ich dzieci i ich edukację ?
(src)="7.5"> နိုင်ငံ ​ တစ် ​ ဝန်း ​ မှာ ​ ရှိ ​ တဲ့ လမ်း ​ တွ ​ ကေ ပျက်စီး ​ ယိုယွင်း ​ နေ ​ ပါ ​ ပြီ ။
(trg)="8.2"> Wpis publiczny w Trybunie Madagaskaru zwraca uwagę na to , że jest jeszcze sporo do zrobienia :
(src)="7.6"> နိုင်ငံ ​ ရေး ​ ကပ် ​ ဆိုက် ​ တာ ​ က လမ်း ​ တွေ ​ ကို ထိန်းသိမ်း ​ ဖို့ ​ နဲ့ အရေးပေါ် ​ ပြင် ​ ဖို့ လို ​ တဲ့ အစီ ​ အစဉ် ​ တွေ ​ အတွက် ဘဏ္ဍာ ​ ရေး ​ စီး ​ ဆင်း ​ မှု ​ ကို လုံး ⁠ လုံး ​ စုတ်ပြတ် ​ သွား ​ စေ ​ ခဲ့ ​ တာ ​ လေ ။
(trg)="8.3"> 11 700 km dróg do naprawy w całym Madagaskarze w6miesięcy OTU ( Urząd pracy awaryjnej ) poświęci się natychmiastowym pracom awaryjnym i okresowemu utrzymywaniu dróg , uszkodzonych przez katastrofy naturalne .
(src)="7.7"> မနှစ် ​ တုန်း ​ က ဒီ ​ နိုင်ငံ ​ ကို ဝင် ​ ခဲ့ ​ တဲ့ ဟာ ​ ရီ ​ ကိန်း ​ ကြောင့် ပျက်စီး ​ သွား ​ တဲ့ အပျက် ​ အစီး ​ တွေ ​ ကို ​ လည်း မ ​ ပြင် ​ ရ ​ သေး ​ ဘူး ။
(trg)="8.4"> ONG Lalana ( Drogi - po malgasku ) informuje czytelników o stanie RN2 , łączącej stolicę z głównym portem w kraju , Toamasina :
(src)="7.11"> တီ ​ နာ သ ​ တင်း ​ မှ ​ တစ် ​ ဆင့် ၊
(trg)="8.7"> Szkody , spowodowane przez cyklony , które dotknęły kraj w zeszłym roku nie zostały dotąd naprawione .
(src)="7.12"> Public domain
(trg)="8.12"> Własność publiczna .
(src)="8.1"> မာ ​ ဒ ​ ဂါ ​ စကား ​ တစ် ​ ခွင် အများ ​ ပြည် ​ သူ ​ သုံး ​ ယာဉ် ​ များ ​ ကို သုံး ​ ၍ ခရီးသွား ​ ရ ​ ခြင်း ​ မှာ ထူးခြား ​ သည့် အတွေ့ ​ အကြုံ ​ တစ် ​ ခု ​ ဖြစ် ​ နေ ​ ပါ ​ သေး ​ သည် ။
(trg)="9.1"> Przemieszczanie się po Madagaskarze w środkach transportu publicznego jest zawsze wyjątkowym doświadczeniem .
(src)="8.3"> ဘ ​ ရောက် ​ စဲ ​ တက္က ​ စီ ​ များ ​ တွင် ကား ​ အမျိုး ​ အစား အစုံအလင် ​ ရှိ ​ ပြီး အများ ​ စု ​ မှာ အပေါ် ​ ပုံ ​ တွင် တွေ့ ​ ရ ​ သည့် ​ အတိုင်း ဗဲန် ​ ကား ​ အသေး ​ စား ​ များ ​ ဖြစ် ​ သည် ။
(trg)="9.3"> Taksówki te istnieją pod postacią różnych pojazdów , zwłaszcza jako minibusy , jakie widać na zdjęciu wyżej .
(trg)="9.4"> Czasami w mieście , poza stolicą , można przemieszczać się rikszą :
(src)="8.4"> မြို့တော် ​ က ​ ထွက် ​ သည် ​ နှင့် " ပေါက် ​ စဲ ​ ပေါက် ​ စဲ " ဟုခေါ် ​ သော အောက် ​ ပါ ​ ဗီ ​ ဒီ ​ ယို ​ တွင် တွေ့ ​ နိုင် ​ သည့် လန် ​ ချား ​ များ ​ နှင့် ဆက်လက် ​ လည်ပတ် ​ နိုင် ​ သည် ။
(trg)="10.1"> Ariniaina , działaczka Global Voices , żyjąca na Madagaskarze , podkreśla , że prawo dt. korzystania z rikszy uległo zmianie , ale pozostają one często używanym środkiem transportu przez wielu mieszkańców :
(src)="9.4"> ဒါပေမဲ့ ​ လည်း " ရိုးရာ " လန် ​ ချား ​ တွေ ​ က အန် ​ ဆီ ​ ရာ ​ ဘဲ ဒေသ ​ ခံတော်တော် ​ များ ⁠ များ ​ အတွက် အဓိက ​ သွား ​ လာ ​ ရေး ​ နည်း ​ အနေ ​ နဲ့ ဆက် ​ ရှိ ​ နေ ​ သေး ​ တာ ​ ပါ ​ ပဲ ။
(trg)="11.1"> Zarząd transportu publicznego usiłuje nadążyć z gwałtownym wzrostem populacji na Madagaskarze , ale , biorąc pod uwagę znaczne ograniczenia ekonomiczne , nie można się spodziewać poprawy sytuacji przez co najmniej jakis czas .
(src)="1.1"> ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း ကလေးငယ် ၁၅၀ ကို မွေးစားခဲ့သူ ကာဂျစ် အမျိုးသမီးကို အောက်မေ့ အမှတ်ရခြင်း
(trg)="1.1"> Upamiętnienie kirgiskiej kobiety , która adoptowała 150 dzieci podczas oblężenia Leningradu
(src)="1.3"> Boris Kudoyarov , RIA .
(trg)="1.4"> Ponowne użytkowanie upoważnione .
(src)="5.1"> Wikipedia မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည် ။
(trg)="5.1"> Fotografia pochodzi z Wikipedii
(src)="6.1"> အယ်တီဘာဆာရိုဗာ သည် ကလေးများ ၏ အသက်အရွယ်တွေကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး သူတို့ကို နာမည်များပေးခဲ့သည့် ။
(trg)="6.1"> Altybasarowa ustaliła wiek dzieci i nadała im ich pierwsze imiona .
(src)="7.1"> ကာဂျစ္စတန် နိုင်ငံတော် ရုပ်သံလွှင့်ဌာန ၏ အဆိုအရ အယ်တီဘာဆာရိုဗာသည် သူမသေဆုံးသည်အထိ သူမ ၏ မွေးစားသားသမီးများမှ ရေးပို့လာသောစားများကို အမြတ်တနိုး သိမ်းစည်းထားခဲ့သည် ။
(trg)="7.1"> Według kirgiskich stacji radiowo-telewizyjnych Altybasarowa zatrzymała i pieczołowicie przechowywała listy od jej adoptowanych dzieci aż do śmierci .
(src)="8.4"> အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ တော့ ( ခ် ) တိုဂွန် အယ်တီဘာဆာရိုဗာ ၄င်းကလေးများ ၏ မိခင်များ နေရာမှ ဝင်ကာ ကလေးများကို ဂရုစိုက်မှု စေတနာ ၊
(trg)="8.2"> Podczas Wielkiej Wojny Patriotycznej w latach 1941-1945 , Toktogon Altybasarowa stała się matką dla 150 dzieci z oblężonego miasta Leningradu .
(src)="8.7"> အယ်တီဘာဆာရိုဗာ သည် သူမ ကိုယ်ပိုင် သားသမီး ၈ ဦး ၊
(trg)="8.4"> Altybasarowa miała ośmioro swoich dzieci , 23 wnucząt i 13 prawnucząt .
(src)="9.2"> ဒီနေရာဟာ လူတစ်ဦး ၏ စစ်မှန်တဲ့ တခြားလူအပေါ်ထားတဲ့ ဆက်ဆံရေး ၏ ဥပမာတစ်ခုပါ ။
(trg)="9.2"> Oto przykład prawdziwie ludzkiego stosunku do innych ludzi !
(src)="9.3"> သူမ ၏ ကလေးများကိုလည်း သူမလိုဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
(trg)="9.3"> Mam nadzieję , że wychowała on swoje dzieci na takie jaką sama była .
(src)="9.4"> တကယ် စစ်မှန်တဲ့ လူသားတွေအဖြစ် ။
(trg)="9.4"> Na prawdziwych ludzi !
(src)="9.7"> ကျွန်ုပ် ၏ အမိ ​ ​ တော့ ( ခ် ) တိုဂွန် အယ်တီဘာဆာရိုဗာ သို့ ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာပို့ခဲ့သော သူတို့ကို ကျေးဇူးများစွာ တင်လှပါသည် ။
(trg)="9.5"> Jedna z osób informując , że jest córką Altybasarowej podziękowała wszystkim życzliwym :
(src)="9.8"> သင် ၏ အထောက်အပံ့ နှင့် ကြင်နာသော စကားများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
(trg)="9.8"> Podziękowania dzieciom Leningradu za dobre wspomnienia ! ! !
(src)="1.1"> မက္ကဆီကို ရပ်ကွက်ကလေးတစ်ခုကို " အံ့ဖွယ် " ဖြစ်သွားစေတဲ့ ကြီးမားသော နံရံဆေးရေးပန်းချီကြီး
(trg)="1.1"> Wspólny wysiłek przemienił osiedle Las Palmitas w „ pierwszą magiczną dzielnicę Meksyku ”
(src)="1.2"> လာ့ ( စ ) ပါမီတား ( စ ) နှင့် အကြီးစား နံရံဆေးရောင်စုံရေးဆွဲမှုကြီး ၏ နောက်ဆုံးအဆင့် ။
(trg)="1.2"> Las Palmitas i końcowy efekt pracy nad ogromnym muralem .
(src)="2.2"> သို့သော် ဤ " အကြီးစား နံရံဆေးရေးကြီး " ဟာ ဆင်းရဲမှု နှင့် ဒုစရိုက်များ အထိုက်အလျောက်ရှိသော ဒီ လာ့ ( စ ) ပါမီတား ( စ ) ( Las Palmitas ) ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်လေးကို သာမာန် ရိုးရိုး အရောင်ချယ်ပေးလိုက်တာတော့ မဟုတ်ပါ ။
(trg)="2.1"> W centrum Las Palmitas , małej dzielnicy miasta Pachuca w stanie Hidalgo , fasady dwustu domów składają się na tło dla największego meksykańskiego muralu , ukończonego w lipcu tego roku .
(src)="4.15"> " သဟဇာတနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းများ "
(trg)="2.2"> Wielkie graffiti tworzy teraz klimat Las Palmitas , dzielnicy borykającej się wcześniej z problemami socjalnymi i przestępczością .
(src)="4.17"> ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဒီဟာက ပွဲတော်နေ့တစ်နေ့လိုပဲ ။
(trg)="3.7"> Uczestniczyli w warsztatach , dyskusjach , wycieczkach .
(src)="4.19"> ကျနော်တို့ မိသားစုတွေအားလုံးမှာ သဟဇာတနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုတွေကို အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ် ။
(trg)="3.8"> Dzięki temu przestępczość wśród młodzieży znacznie się zmniejszyła .
(src)="4.20"> ဒီလိုပွဲတွေမျိုးနဲ့ဆို ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ဟာ အများကြီး တိုးတက်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ပြီးတော့ နောက်ဆို ပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေ သိပ်အများကြီးတွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
(trg)="3.11"> Myślę , że dzięki tym wydarzeniom moja dzielnica będzie lepsza i czuję , że nie będzie już tak niebezpiecznie .
(src)="5.5"> " မက္ကစီကို ၏ ပထမဦးဆုံး ( မှော်ဆန်သော ) အံ့ဖွယ်ရပ်ကွက် "
(trg)="3.12"> Mieszkańcy Las Palmitas zebrali się podczas warsztatów tworzenia chińskich lampionów .
(src)="7.2"> မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ အက်ကာတေပက် ရှိ မြို့သစ်များ ၏ အများလျှောက်လမ်း မြေပြန့်နေရာ ၊
(trg)="4.1"> W wywiadzie dla portalu Planisferio , zespół mówi , że innowacyjne podejście Germen Crew nie opiera się na realizacjach w instytucjach państwowych .
(src)="7.3"> ဂွာဒါလာဟာရာရှိ မီရာဗေး နေရာ အစရှိသည်တို့အပါအဝင် နေရာ အများအပြားတွင် စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်သည် ။
(trg)="5.3"> Wszystko wskazuje na to , że można się spodziewać dalszego ciągu ich działań .
(src)="1.2"> သူတို့ ၏ ဖြစ်ရပ်တွေကို မဝေမျှခင် သင့်ရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မှန်ကန်တိကျအောင် အရင်လုပ်ပါ ။
(trg)="1.1"> Syryjscy uchodźcy ?
(trg)="1.2"> Sprawdź fakty , zanim zaczniesz udostępniać ich historie
(src)="1.3"> ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်း လူသားတွေပါပဲ ။
(trg)="1.3"> Uchodźcy to też Ludzie .
(src)="2.1"> ဤနှစ်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်တစ်ခုက ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များ ၏ နှစ်တစ်နှစ်လို ဖြစ်နေတော့သည် ။
(trg)="2.1"> Niestety zanosi się na to , że ten rok będzie rokiem syryjskich uchodźców .
(src)="3.2"> ဥပမာအားဖြင့် ဥရောပရှိ အချို့ လက်ယာဘက် နိုင်ငံရေးပါတီများဟာ လတ်တလော ဒုက္ခသည် အရေးအခင်းများကို အသုံးချကာ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ ဥရောပတွင် ခိုလှုံမှုကို တံခါးပိတ်ဖို့ ၄င်းတို့ ၏ အစီအစဉ်များကို တွန်းပို့ရန် ကျိုးစားနေကြသည် ။
(trg)="2.2"> Chociaż niezliczone historie ludzi uciekających z rozdartego wojną kraju są przejmujące , nie możemy traktować ich całkowicie bezkrytycznie .
(src)="3.3"> အမှန်ပင် ယခု လက်ရှိ Facebook ပေါ်မှာ အလွန် ပြန့်နှံ့နေသော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည့် ဂျာမနီရှိ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ ISIS အိုင်စစ် အလံကို ဝှေ့ယမ်းနေသည် ဟုဆိုနေသော ဓာတ်ပုံသည် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က ဓာတ်ပုံသာဖြစ်သည် ၊
(trg)="2.3"> Czasem mamy do czynienia z dezinformacją : niektóre ze zdjęć i filmów krążących w sieci , z pozoru obrazujących tragedię Syryjczyków , w rzeczywistości zostały przerobione lub nieprecyzyjnie opisane .
(src)="3.4"> လက်ရှိ အရေးအခင်းနှင့် ဆက်စပ်သည်မဟုတ် ။
(trg)="3.1"> Powody mogą być różne , od tzw. clicktywizmu po względy polityczne .
(src)="4.1"> အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များနှင့် ပက်သက်သည့် ဖြစ်ရပ် ၄ခုသည် သင် ၏ လူမှုကွန်ယက် အကောင့်အပေါ်တွင် ကြုံဖူး မြင်ဖူးကြမည့် အဖြစ်များ ဖြစ်သော်လည်း တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်တော့ တလွှဲသာဖြစ်သည် ။
(trg)="3.3"> Szeroko udostępniane na Facebooku zdjęcie , ukazujące rzekomo syryjskich uchodźców wymachujących flagą ISIS w Niemczech , zostało zrobione trzy lata temu i nie ma nic wspólnego z obecnym kryzysem .
(src)="4.2"> ဖြစ်ရပ် ၁ ။
(trg)="4.2"> Historia nr 1 : Włoska modelka i łódź syryjskich imigrantów
(src)="4.5"> ဘယ်လ်ဂျီယံရောက် ဆီးရီးများ Facebook အုပ်စု ၏ ဝေမျှထားသော အထက်ဒီဗီဒီယိုကို အောက်ပါစာတန်းနှင့် တွေ့နိုင်သည် ။
(trg)="5.1"> Ten film , udostępniony na grupie Syryjczycy w Belgii na Facebooku , ma następujący opis :
(src)="4.8"> မျှော်လင့်မထားတဲ့ ဒုက္ခသည် ရွှေ့ပြောင်းသူတစု အီတလီမှာ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကမ်းခြေသို့ ရောက်ရှိလာပါတယ် ။
(trg)="5.3"> Ta modelka stanie się sławna dzięki temu zabawnemu , spontanicznemu i niepowtarzalnemu wydarzeniu .
(src)="4.10"> သူတို့ထဲက အများစုဟာ ဆီးရီးယား နှင့် ပါလက်စတိုင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ။
(trg)="5.4"> Większość tych uchodźców to Syryjczycy i Palestyńczycy .
(src)="4.11"> သူတို့ ၏ အဘေးကင်းလုံခြုံမှု အတွင် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
(trg)="5.5"> Dzięki Bogu są bezpieczni .
(src)="4.12"> သို့သော် ယခုလက်ရှိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေမျှနေသည့် ဗီဒီယိုသည် အီတလီမှ မဟုတ်သလို ရိုက်ကူးထားသည့် နေရာမှာလည်း အီတလီတွင် မဟုတ်ပါ ။
(trg)="5.6"> Jednak autorka filmu , który został tak szeroko rozpowszechniony , nie jest Włoszką ,asam film nie został nawet nakręcony we Włoszech .
(src)="4.13"> ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်း ဆီးရီးယား မဟုတ်သလို ပါလက်စတိုင်းတွေလည်း မဟုတ်ကြပါ ။
(trg)="5.7"> Uchodźcy nie są ani Syryjczykami , ani Palestyńczykami .
(trg)="15.7"> Phogotraphy wyjaśnia :
(src)="8.4"> ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို လူတွေက ဒီလို မလိမ့်တစ်ပတ်လုပ်ကြပုံကို အံ့အားသင့်မိပါတယ် ။
(trg)="7.1"> Jest tylko jeden problem : zdjęcie nie pochodzi z Syrii , ale z Arabii Saudyjskiej .
(src)="9.1"> " ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံပညာကို မြတ်နှိုးပါတယ် ။
(trg)="7.2"> Zdjęcie dzięki uprzejmości bloga haralddoornbos
(src)="9.3"> ကျွန်တော်လည်း ကလေးငယ်တစ်ယောက်က သူ့မိဘတွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့ အမေတ္တာက ဘယ်သူနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရဘူးဆိုကို ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြဖို့ အတွေးတစ်ခုအတွက် အစီအစဉ်လေးလုပ်ခဲ့တာပါ ။
(trg)="8.1"> Autorzy bloga prawdopodobnie jako pierwsi zbadali ten przypadek - skontaktowali się z autorem zdjęcia , Abdulem Azizem al-Otaibi , saudyjskim fotografem z Janbu al-Bahr .
(src)="9.5"> ဘယ်အရာမှ အစားမထိုးနိုင်ပါဘူး ။
(trg)="8.2"> Na zdjęciu widzimy jego siostrzeńca :
(src)="10.2"> ဒီပုံက ကျွန်တော့် တူ အီဘရာဟင်နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်း နောက်ကွယ်ကပုံ ဖြစ်ပါတယ် ။
(trg)="9.2"> Ja miałem pomysł na projekt serii zdjęć pokazujących miłości dziecka do rodziców .
(src)="10.3"> ဖြစ်ရပ် ၃ ။
(trg)="9.5"> To zdjęcie również pokazuje mojego siostrzeńca Ibrahima w trakcie sesji
(src)="11.3"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ .
(trg)="9.6"> Historia nr3: Imigranci odmawiają jedzenia , które nie jest halal
(trg)="11.1"> Na YouTube , komehtap K wyjaśnia :
(src)="12.6"> သူတို့ကို ပြန်ပို့သင့်တယ် ။
(trg)="13.6"> Według mnie powinno się ich odesłać .
(src)="12.15"> ( မူရင်း တင်သူကို မသိရ ) သို့သော် အမှန်တကယ်ကတော့ ယင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ရသလို မဟုတ် ။
(trg)="13.10"> Syryjska matka , która próbuje dopłynąć do bezpiecznego brzegu z noworodkiem na rękach .
(src)="13.1"> ပင်လယ်ထဲမှာ ရုန်းကန်နေသည့် ဆီးရီးယားမိခင် ၏ ဓာတ်ပုံသည် အွန်လိုင်း ပေါ်တွင် ပြန့်နှုံနေသည် ။
(trg)="13.11"> Szeroko rozpowszechnione zdjęcie ( źródło nieznane ) , na którym coś jest nie tak .
(src)="13.3"> အင်တာနက်သုံးသူတွေဟာ ဓာတ်ပုံဟာ photoshopped လုပ်ခံထားရပြီး အမျိုးသမီး ၏ ဆံပင်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သတိပြုမိခဲ့ကြသည် ။
(trg)="14.3"> Netizeni szybko zauważyli , że zdjęcie zostało przerobione tak , by zakryć włosy kobiety .
(src)="13.4"> Omneya Talaat က tweet တွင် ဤသို့ပြောသည် ။
(trg)="14.4"> Omneya Talaat komentuje na Twitterze :
(src)="13.7"> ဒီနေရာမှာ ဘာမှ ငြင်းခုန် နေစရာ မရှိတော့ပါဘူး ။
(trg)="14.6"> Nie ma tu o czym dyskutować .
(src)="13.13"> ရုခ်ရှန် ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ရေလှိုင်းတွေကြောင့် သူမ ၏ ၁နှစ်အရွယ်သားနှင့်အတူ ရေထဲတွင် မျောနေသည်ကို ဓာတ်ပုံမှ သိရသည် ။
(trg)="15.4"> Później dowiedzieliśmy się , że roczny syn Rukhsan został porwany przez silny prąd i utonął .
(src)="13.15"> သူမ ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက အရေးကြီးသလား ။
(trg)="15.6"> Czy jej ubiór ma znaczenie ?
(src)="13.20"> ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပတ်သက် ၍ ပူပန်ပြီး သူမဟာ ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခကို ပြန်ပြောပြဖို့ အသက်ရှင်မလားကို ဂရုစိုက်သည် ။
(trg)="15.8"> Oczywiście pod jakimkolwiek ubraniem kryje się istota ludzka , matka , która straciła rocznego syna i niemal własne życie .
(src)="13.22"> သူမဟာ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင် ဝတ်ဆင်ထားတာကို တွေမြင်နိုင်သည် ။
(trg)="15.12"> Teraz widzimy , że ubiera się tak jak my , na Zachodzie .
(src)="13.23"> ဥရောပတွင် တိုင်းတပါးသားများကို မုန်းတီးမှုများ မြင့်တက်လာသည့် အကြားမှာ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူတို့ဟာလည်း ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူတူပါပဲ ဆိုတာကို ကမ္ဘာကို ပြသဖို့ ပင်ဖြစ်သည် ။
(trg)="15.13"> Wobec rosnącej fali ksenofobii w Europie , pokazanie światu , że jesteśmy tacy sami , byłoby z pewnością skuteczniejszą formą wyrażenia naszego współczucia .
(src)="1.1"> အင်တာနက်စွယ်စုံကျမ်း Wikipedia ၏ ကျားမ ၊
(trg)="1.1"> Wikimujeres rekrutuje redaktorki w imię równowagi płci na Wikipedii